पोखराको किसानको एउटा भालेको मूल्य २लाख पाउदा समेत बिक्रि गर्न मानेनन् कारण एस्तो | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
नेपालमा लोकल कुकुराको मूल्य कति होला ? किलोको ५०० देखि १००० ठाउ हेरेर तर पोखराको एक किसानले आफ्नो भालेको मूल्य २ लाख दिनेमान्छे औदापानी बिक्रि गर्न अस्विकार गरेका छन कारण एस्तो रहेछ ।
एउटा कुखराको भालेको मुल्य कति पर्ला ? बढीमा १० हजार ? तर पोखराका एक किसानको फर्ममा भएको भालेको मुल्य २ लाख पाउँदा पनी उनले बिक्री गरेनन् । १५ बर्ष बुढो भाले बार्षिक २० लाख भन्दा बढी आम्दानी गराईदिन्छ कृषकलाई । भालेको मुल्य सुनेर त तपाई छक्क पर्नु भयो होला अर्को कुरा सुनेर झन छक्क पर्नुहुनेछ । २ लाख पाउँदा नबेच्ने भालेले सबै कुखुरा बोलाएर भाषण दिन सम्म सक्छ । पोल्टीफर्मका संचालक राजेन्द्र अधिकारी भन्दै थिए, यो भालेले मानिसको इसारा बुझ्छ र अरु कुखुरा बोलाएर मानिसको कुरा सम्प्रेषण गर्छ । यो भाले अरु भालेको तुलनामा अत्यन्त चनाखो छ ।
कतै आकाशमा चिल घुम्यो भने सबै कुखुरालाई खबर गर्छ, कुनै कुखुरा हरायो भने पनि खोजेर ल्याउँछ । यो बीउको लागी पालेको र यसको बीउ उत्पादन गर्न बिभिन्न संघसंस्था आएर २ लाख दिदाँ पनि नदिएको संचालक अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार यो भालेले बार्षिक २० लाख भन्दा बढी आन्दानी गराईरहेको छ । २ लाखको भाले हेर्नको लागी र पशुपंक्षिबारे अनुसन्धान गर्नको लागी उनको फार्ममा मन्त्रीदेखी सर्वसाधरणको घुईचो समेत हुन्छ । पोखराको लेखनाथ स्थित डाँडाको नाकमा रहेको उनको फार्म पछिल्लो समय लोकल कुखुरा, क्रस, लुइँचे, बनराजा, हाँस लगायत पशुपंक्षिका लागी परिचित बन्दैछ ।
किन सेतो हुन्छ हवाईजहाजको रङ ?
एजेन्सी – तपाईंले सानैदेखि देख्दै आएको हवाईजहाजको रङ सेतो नै भएको याद गर्नुभएको छ ? प्रायः हवाईजहाजको रङ सेतो नै हुन्छ । यसको पछाडि वैज्ञानिक कारण जोडिएको बताइन्छ । हवाईजहाज धेरै उचाईमा उड्ने भएकाले वायु मण्डलको तापक्रमले असर गर्न नसकोस् भनेर सेतो रङको प्रयोग गरिन्छ । सेतो रङमा तापमान बढ्ने सम्भावना कम हुने भएकाले हवाईजहाजको पाटपुर्जामा नराम्रो असर नपर्ने र सेतो रङले ताप र घाम आफूतिर एकिकृत हुन दिदैँन । अर्को कारण यसको पेन्टि ङमा लाग्ने खर्च पनि हो ।
यदि हवाईजहाजमा अन्य रङको प्रयोग गरियो भने छिट्टै उड्ने र फेरि रङ गर्न महंगो पर्ने भएकाले पनि यसमा सेतो रङको नै प्रयोग गरिन्छ ।साथै, सेतो रङ लगाउँदा विमानको बडीमा आएको कुनै पनि खराबी जस्तै चिरा परेको वा तेल चुहिएको सजिलै देख्न स किन्छ । उता एक चिनियाँ अन्तरिक्षयानले चन्द्रमाको अँध्यारो भागमा पहिलोपटक अवतरण गरेको त्यहाँको राज्यद्वारा सञ्चालित मिडियाले जनाएको छ ।चाङ’फोर लुनार ल्याण्डर र रोभरले बिहिबार स्थानीय समयअनुसार १० बजेर २६ मिनेट जाँदा चन्द्रमा अवतरण गरेको चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजनले जानकारी दिएको हो ।
पृथ्वीबाट चन्द्रमाको नदेखिने भागबारे कमै मात्र अध्ययन भएको छ । उक्त भाग पृथ्वीले देख्ने भागमा धेरै फरक रहेको अनुसन्धानकर्ताको अनुमान रहेको छ ।अहिले पठाइएको रोबोट सवारीले चन्द्रमाको सतह र भित्र दुवै अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।उक्त रोबोटमा प्यानारोमा क्यामाराको साथै परीक्षणका गर्नका लागि मापन यन्त्रहरु रहेका छन् ।रसिया र युरोपेली राष्ट्रहरुसँगको सहकार्यले चीनको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा फाइदा पुगिरहेको छ । गत वर्ष एउटा रकेट प्रक्षेपण गर्ने चीनको प्रयास असफल भएको थियो । सन् २००३ मा भने चीनले पहिलो पटक मानवसहितको यान अन्तरिक्षमा पठाएको थियो ।
समाचारपोखराको किसानको एउटा भालेको मूल्य २लाख पाउदा समेत बिक्रि गर्न मानेनन् कारण एस्तो
यस्तो छ बन्दको ताजा अपडेट, कहाँ-कहाँ भयो बिस्फोट र आगजनी, १५ जिल्ला प्रभावित